Tenga Wireless V5.0 Makaralı Mota Zuva Visor Clip Handsfree Runhare Mutauri Kit - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Wireless V5.0 Makaralı Mota Zuva Visor Clip Handsfree Runhare Mutauri Kit
Wireless V5.0 Makaralı Mota Zuva Visor Clip Handsfree Runhare Mutauri Kit yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Rudzi rwezvinhu: plastiki + yemagetsi chinhu
Zvimwe Zvakakosha: kutepfenyurwa kwezwi
Ukuru hwechinhu: 10 * 6 * 2.1cm
Muenzaniso Zita: Wireless Mota Bluetooth
Type: sun visor mutauri
Kutengesa nguva: maawa anenge 2
Kuisa magetsi: 5v
Kuramba kwemutauri: 4 Ω
Simba remutauri: 2w
Kushanda tembiricha: 60 ℃
Bhatiri: 550mah yakavakirwa-mukati bhatiri
Nguva yekufona: anenge maawa makumi maviri nematanhatu
Nguva yakamira: 500 maawa
Makaralı: v5.0 + EDR
Kutengesa kure: 10m
Kubatana nefoni mbiri: rutsigiro
Kufona nhamba kutepfenyurwa: tsigiro
Izwi raSiri rakamuka: tsigiro
Yakavanzika kufona: rutsigiro
Otomatiki kubatana: rutsigiro
Kutepfenyurwa kwezwi: Iyo speaker speaker inogona izwi kutepfenyura iyo yekufona nhamba, kukuyeuchidza nezve yakaderera bhatiri, Bluetooth kubatana, nezvimwe.
Bluetooth 5.0: Iyo yepamusoro yeBluetooth 5.0 tekinoroji ine chiratidzo chakagadzikana uye 10-mita yekufambisa nhambwe.
Mahara-maoko: Iyo sun visor mutauri inogona kutsigira kutepfenyura kwezwi kwekufambisa kwefoni, mimhanzi inoridza, nezvimwe, izvo zvinogona kusunungura maoko ako.
Bvisa mutauri: Iyo zuva visor inogamuchira ine 4 Ω 2w yakavakwa mutauri inotora DSP tekinoroji yekudzora ruzha uye maungira, ichikupa iwe iri nani kufona ruzivo.
Nyore kushandisa: Bhatani rimwe chete rekutora runhare uye bhatani rimwe rekuramba kufona.
Kubatana: Iyo speaker speaker inotsigira kuve yakabatana nemairi mafoni maviri panguva imwe chete. Uye zuva visor mutauri ine yakavakirwa-mukati vibration sensor. Saka inogona kungozvibatanidza neako smartphone kana gonhi remota rakavhurika. Kana iyo nhare yakabatana iri pamusoro pegumi metres kubva pamhepo visor mutauri, iyo visor yezuva mutauri inozozvimisa yega kubatana kuti ichengete simba.
Micro kuchaja chiteshi: Iyo yepasi rose standard slot iri nyore kushandisa. Uye iyo yakavakirwa-mudunhu dziviriro dhizaini inogona kuchengeta iyo yekuchaja yakachengeteka.
Yakareba nguva yekushanda: Iyo sun visor mutauri ine 550mah bhatiri inogona kutsigira mazana mashanu emira kumira uye maawa gumi kufona.
Nyore kuisa: Iyo zuva visor mutauri inogona kuiswa nyore pane yezuva visor neayo kumashure clip pasina chero chimwe chishandiso chinodiwa.
1 * zuva visor mutauri
1 * bhokisi remabhokisi